Facebook ရဲ့ အခမဲ့ အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု လာပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Facebook ရဲ့ အခမဲ့ အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု လာပြီ
Facebook ရဲ့ အခမဲ့ အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု လာပြီ
Posted by ဂျစ်စူ on Nov 16, 2010 in Computers & Technology, Know-How, DIY | 1 comment
မျိုး နာမည် ယှဉ်တွဲ ယူနိုင်သည် ဟု သိရသည်။
ghacks technology news ကတွေ့ ခဲ့တာလေးပါ။သူ့ အတိုင်းလေးပဲ ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ လင့်ခ် မှာသွားကြည့်လဲ၇ပါတယ်။ဒီအောက်မှာလဲ ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
youtube က ဗွီဒီယိုဖိုင်နဲ့ လဲ ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။
Facebook has createdatour of messages which is currently showing an error. It is likely that the tour will be available later today. (via)
Messages has always been the place for private exchanges on Facebook, and this won’t change. With the new Messages, now you have easy access to all your private conversations with your friends in one place.The new Messages interface not only displays the Facebook messages you exchange with friends, but it also interweaves your chats, texts and emails (should you choose to create an @facebook.com address). It’sacentral place to control all of your private communication, both on and off Facebook.
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ရသလိုရှဲလိုက်တယ်နော်။
ဗရုတ်သုက္ခဖြစ်နေရင် sorry ပါ။